Rehefa mijery an'ireny horonantsary ireny miaraka amin'ny zanany lahy - misaotra. Ny dadan'i Dada dia miasa ao amin'ny Dreamworks
Видео, interesnenkoe / From Poster
Ny ankizy tsirairay dia manonofy hitsidika tantara an-tsoratra na sarimihetsika an-tsarimihetsika izay ahafahanao manandrana ny anjara toeran'ny superhero na ny toetoetra iray tianao indrindra. Nanam-bintana i Little James: ny dadany dia miasa ao amin'ny Dreamworks, izay anaovany sary mihetsika ho an'ny sarimihetsika sy sariitatra. Izy no mamorona
Vehivavy sy andriamanibavy! Sary nalaina 22 nalaza tao amin'ny Marilyn Monroe, izay navoakan'ny mpaka sary fotoana fohy talohan'ny nahafatesany
Anisan'ireo olo-malaza fahiny tamin'ny taonjato lasa teo, ny anarana Marilyn Monroe dia tonga ao an-tsain'ny iray amin'ireo voalohany. Ny hatsaran-tarehy tsara tarehy, izay lasa marika famantarana ny 50, dia nahatsiaro manerana an'izao tontolo izao nandritra ny taona maro. Ny hatsaran-tarehin'ny hatsaran-tarehin'i Marilyn dia nanokatra ny varavarany ho any amin'ny tontolo ambony:
Sary 14 avy amin'ny fanangonana Indiana Maharajas, izay nopotehin'ny 100 taona tao amin'ny tranon'ny lapa!
Maharaja Ram Singh II no nitondra tao amin'ny fanjakan'i Jaipur teo antenatenan'ny taonjato lasa talohan'ny farany. Amin'izao fotoana izao, ny fotoana nanjakany dia noheverina ho toy ny taon-jato tany amin'ireo tany ireo. Iray amin'ireo tantsaha malaza indrindra any Jaipur, Ram Singh dia nanaiky nanaiky ny fiarovana ny satroboninahitry Britanika.
Vladimir Kuzmin: inona no ataon'ilay mpihira rock malaza ao amin'ny Diva androany ary aiza no nalehany?
Ny fianakavianay dia manana havana marobe miaina any amin'ny firenena samihafa ao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha. Isaky ny mandeha dia mitsidika azy ireo isika. Tsaroako ihany koa ny iray amin'ireo fitsangantsanganay satria ny hira "You are a fairy tale eo amin'ny fiainako" notarihin'i Vladimir Kuzmin. Tsy tena fantatro
Fihetseham-po mahatsiravina avy amin'ny fiainan'ny vehivavy rosiana tao an-tanàna tamin'ny faramparan'ny taonjato faha XIX!
Ny "Life of Ivan" dia boky iray nataon'i Olga Semenova-Tyan-Shanskaya, izay navoaka voalohany tao amin'ny 1906. Ao anatin'izany, ny zanakavavin'ny mpizaha tany sy mpitsidika dia miresaka momba ny fiainan'ny tanàna Rosiana tamin'ny faran'ny taonjato faha-19. Tamin'ny voalohany, tsy dia nalaza loatra ny asa, ary avy eo izany
Ny dokotera Ernst Moreau dia namonjy ireo ankizy 996 noho ny ... siramamy karôta.
Amin'izao fotoana izao, Ernst Moro dia antsoina hoe medikaly Slovaky. Na izany aza, dia tonga teto amin'izao tontolo izao izy ary niresaka momba ny Empira Austro-Hongroà tao an-tanàna, izay nantsoina hoe Laibach, ary ankehitriny dia antsoina hoe Ljubljana. Ny barbel be marenina dia niaina tamim-pahamendrehana, talohan'ny olon-dehibe niharan'ny fanabeazana ho an'ny fiterahana.
Ny zanany dia nanome fiara nofinofisin-drainy. 1,5 tapitrisa
Видео / From Poster
Ny ray aman-dreny no olona malala indrindra eo amin'ny fiainana. Manangana zanaka izy ireo ary mandany vola amin'ny fanahiny. Ary mahafinaritra tokoa rehefa mandray fisaorana ianao ho valin'izany. Toa hita fa nahavita nanangana ny zanany manokana ny lehilahy zokiolona iray avy amin'ity lahatsary ity. Raha ny marina, izy dia manatanteraka ny nofinofin'ny rainy. Efa nomeny trano iray izy, ary ankehitriny dia nahita sy nividy fiara izy ...
Ny zanany dia nanome fiara nofinofisin-drainy. 1,5 tapitrisa Read full »
1 2 ... 7 manaraka →